Guddoomiyaha Xidhiidhka Kubadda Cagta Somaliland ka Warbixiyey Tartan loogu Magac-darray Madaxweyne Siilaanyo oo lagu Furayo Garoonka Mo Farax Stadium ee Gabiley
HomeWararka MaantaGuddoomiyaha Xidhiidhka Kubadda Cagta Somaliland ka Warbixiyey Tartan loogu Magac-darray Madaxweyne Siilaanyo oo lagu Furayo Garoonka Mo Farax Stadium ee Gabiley
05/10/2017 Samatar Mohamed
Guddoomiyaha Xidhiidhka Kubadda Cagta Somaliland Mr. Maxamed-Amiin Cabdi Cilmi ayaa markii ugu horeysay ka warbixiyey tartan kubadda cagta ah oo loogu magac-darray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), kaas loogu daah-furayo garoonka cusub ee loogu magac daray Orod yahanka u dhashay Somaliland ee Mo Farah kaas oo magaaladda Gabiley laga dhisay.
Mr. Maxamed-Amiin Cabdi Cilmi Guddoomiyaha Xidhiidhka Kubadda Cagta Somaliland oo u waramay Cadalool.com ayaa xaqiijiyey in 10 bisha oo ku beegan maalinta Salaasadda ee toddobaadka dambe uu Madaxweynaha Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu xadhiga ka jari doono garoonkan oo si casriya loo dhisay, sidoo kalena Doogga Sanaacigga ahi uu ku goglan yahay. “Waxaan xaqiijinayaa in 10 bishan uu Madaxweynaha Siilaanyo uu xadhiga ka jari doono garoonkan, waxaana isla maalintaas tartan uga furmi doona 6 kooxood oo ka kala socda gobollada dalka. Kooxaha tartanka ka qeyb-galaya ayaa ah kooxaha ku ciyaara Dawladdaha Hoose ee Magaalo madaxyadda dalka, waxaana tartankaas uga mahad-naqaynaa Maayarka Degmadda Gabiley iyo Gollihiisa Deegaanka oo kharaskhka ku baxaya gacan naga siiyey” ayuu yidhi Guddoomiye Maxamed-Amiin.
Guddoomiyaha Xidhiidhka Kubadda Cagta Somaliland ayaa waxa uu sheegay in tartankan loogu magac darray Madaxweynaha qaranka, kaas oo loogu sharfayo wax-qabadka iyo dedaalka ay xukuumaddiisu dalka ka hirgelisay muddada ay tallada dalka haysay, waxaana isaga oo ka hadlaya uu yidhi “Xidhiidh ahaan iyo Gollaha Deegaanka Gabiley waxaanu isla afgarananay in tartankan lagu maamuuso Madaxweynaha oo loogu magac darro, waxaana tartankan oo runtii noqon doona mid xiiso leh si toos ahna Telefishanadda looga soo taban doono uu noqdo Siilaanyo Cup. Waxaanan jeclahay talaabadan inaan uga mahad-naqo Maayarka Degmadda Gabiley iyo Golihiisa sida wanaagsan ee ay ugu heelan yihiin in ciyaaruhu horumar gaadhaan, ka xidhiidh ahaana ilaa imika dhanka u diyaar garawga tartankan waxaanu uga wada shaqeynaynaa si wanaagsan”.
Dhanka kale, Mr. Maxamed-Amiin ayaa sheegay in ka xidhiidh ahaan ay si fiican ugu diyaar garoobeen in tartankani uu si qurux baddan ku bilowdo kuna dhammaado, sidoo kalena wuxuu xusay in maalinta Sabtida ay sameyn doonaa qori-tuurka sida kooxuhu ay iskugu dhici doonaa heerka Group-yadda. “Dhammaan wax kasta ka xidhiidh ahaan si wacan ayaanu ugu diyaar garawnay, waxaana naga go’an in tartankani uu noqdo mid saameyn iyo micno weyn keena maadaama Madaxweynaha qaranka loogu magac daray. Tartanku wuxuu soconayaa muddo 6 cisho ah maadaama wakhtiga uu ku soo beegmay aanu nagu filneyn, haddana waxaan noo qorsheysan kahor ololaha doorashadda inuu soo dhamaado. Dhanka sida kooxuhu iskugu beegmayaana haddii Alle idmo Sabtida ayaanu qori-tuurka u sameynaynaa, waxaana uu noqonayaa mid laba Group oo min saddex kooxood ka kooban” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Ugu dambeyntii, Guddoomiye Maxamed-Amiin ayaa sheegay in tartankani uu yahay mid noociisa oo kale uu ku cusub yahay dalka, uuna yahay markii koowaad ee la qabto tartan u dhaxeeya kooxaha ku ciyaara magacyadda Dawladdaha Hoose ee Magaalo madaxyadda dalka. Waxaa kale oo uu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay in kooxaha tartankan ka qeyb-galaya ee ka kala imanaya Magaalo madaxyadda dalka inay sida ugu fiican ugu diyaar garoobayaan, waxaana uu xusay in toddobaad kahor ay wargelinta tartankan ogaayeen tababarkiina bilaabeen, sidoo kalena ay rajo ka qabaan in Maayaradda iyo xildhibaanadda golayaashoodu ay si wanaagsan u soo anba-bixin doonaan.